भाडामा ठगिनुभएको छ ? सुरु भयो बढी लिनेमाथि अनुगमन
सत्तारुढ नेकपामा चर्को गुटबन्दी : चार नेताद्वारा सचिवालय बैठक बहिस्कार, पाँचले बोलाए स्थायी समिति
अर्बौ पर्ने बिद्यालयको जग्गामा वडाध्यक्षको आँखा, संरक्षक रहने वडाध्यक्ष आफैं बने ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष
अवैध नियुक्ति खारेज गर्न अखिल क्रान्तिकारीको २४ घन्टे अल्टिमेटम
राजनीतिक दबाबमा आफ्नै सहकर्मीविरुद्ध आक्रमण गर्ने प्रहरीलाई बचाउने प्रयास
आन्तरिक पर्यटकसंग प्रवेश शुल्क लिएको विरोधमा एक्यापको कार्यालयमा तालाबन्दी
पोष्टपाटीका प्रधानसम्पादक चन्दलाई पक्राउ गर्नुको लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
ओली र प्रचण्डको समाजवाद ‘पाजी समाजवाद’ : गोपाल किरांती
आश्रम सञ्चालक र वेश्यालय सञ्चालकको मिलेमतोमा वेश्यालयबाट उद्धार गरिएका १२ नेपाली चेली बेपत्ता
नेपाली सेनामा विभेद : पहुँचवालाले नियम तोडे अवसर, सानालाई सिधै बर्खास्ती
दसैंको अग्रिम बुकिङको टिकटमा कालोबजारी गर्ने, बढी भाडा लिने, सहुलियत नदिनेलगायत नियमविपरीत काम गर्नेलाई यातायात व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने भएको छ ।
अनुगमन गरी कारबाहीको अभियान बुधबारैदेखि सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले जानकारी दिएका छन् । सार्वजनिक यातायातका बारेमा धेरै गुनासा आएकाले आफैं अनुगमनमा निस्किएको उनले सुनाए ।
विभागको नेतृत्वमा बुधबार नयाँ बसपार्कदेखि थानकोटसम्म अनुगमन भएको छ । नयाँ बसपार्कलगायतका स्थानमा समितिका सवारीले ‘टिकट सकियो’ भन्ने गरेका छन् । दसैंमा लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले पहिल्यै टिकट लिने गरेका छन् । असोज ९ देखि मात्र यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरेका थिए ।
बुकिङ सुरु गरेको भोलिपल्टदेखि नै ‘टिकट सकिइसक्यो’ भन्दै कालोबजारी (ब्ल्याक) मा बढी भाडा लिन थालेको यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका रामबहादुर थापाले बताए । केही कम्पनीका टिकट काउन्टरले सीमित मात्रामा टिकट बुकिङ गरे पनि समितिका काउन्टरले भाडा बढाउने अस्त्रका रुपमा मात्र अग्रिम बुकिङलाई प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ बसपार्कलगायत टिकट काउन्टरमा समायोजित नयाँ भाडा–सूची नहुँदा यात्रुसँग मनपरी भाडा असुली भइरहेको छ । मन लागेजति भाडा लिन काउन्टरले टिकटमा कहाँबाट कहाँसम्म पुग्ने भनी स्थान समेत लेख्दैनन् ।
सार्वजनिक यातायातमा देखिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि अनुगमनलाई तीव्रता दिन लागिएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । असोज ७ मा समायोजन गरिएको भाडा–सूची प्रकाशन गरेर दसैंअघि नै वितरण गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए ।
मुख्य–मुख्य चोकमा भाडा–सूचीको बोर्ड राख्ने तयारी भइरहेको समेत विभागले जनाएको छ । विभागले तोकेको भन्दा एक रुपैयाँ मात्र बढी भाडा लिए पनि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने सरकारी समाचार एजेन्सी राससले जनाएको छ ।
Posted on October 4, 2018 Author Categories मुख्य समाचार
Previous Previous post: गर्भपतन : कस्तो छ आँकडा ? ७७ जिल्लामध्ये कहाँ हुन्छ सबैभन्दा बढी ?
Next Next post: काङ्ग्रेस बाँचेको प्रमाण खोइ शेरबहादुर ?